China Lwalugobile ibhande elihambayo ifektri abakhiqizi | I-Yuantuo
Igoli lebhande eligobile
Igwegwe elihambayo lebhande luhlobo lwemishini yokudlulisa enomthamo omkhulu wokuhambisa, izindleko zokusebenza eziphansi nobubanzi besicelo obubanzi. Ngokwesakhiwo sayo sokusekela, kunezinhlobo ezimbili: uhlobo olungaguquki nohlobo lweselula; ngokwezinto zokudlulisa, kukhona ibhande, ibhande lepulasitiki kanye nebhande lensimbi. Ukushisa kwemvelo yokusebenza kwe-conveyor ngokuvamile kuphakathi kuka-10 ℃ no + 40 ℃, futhi izinga lokushisa lezinto ezibonakalayo alingeqi kuma-70 ℃; ibhande lenjoloba elimelana nokushisa lingathutha hi ...
Igwegwe elihambayo lebhande luhlobo lwemishini yokudlulisa enomthamo omkhulu wokuhambisa, izindleko zokusebenza eziphansi nobubanzi besicelo obubanzi. Ngokwesakhiwo sayo sokusekela, kunezinhlobo ezimbili: uhlobo olungaguquki nohlobo lweselula; ngokwezinto zokudlulisa, kukhona ibhande, ibhande lepulasitiki kanye nebhande lensimbi. Ukushisa kwemvelo yokusebenza kwe-conveyor ngokuvamile kuphakathi kuka-10 ℃ no + 40 ℃, futhi izinga lokushisa lezinto ezibonakalayo alingeqi kuma-70 ℃; ibhande lenjoloba elimelana nokushisa lingahambisa izinto ezinokushisa okuphezulu ngaphansi kuka-120 ℃. Akufanelekile ukusebenzisa ibhande elihambayo lapho izinga lokushisa lezinto liphezulu. Lapho uhambisa izinto ngezinto ze-asidi ne-alkaline kawoyela namakhemikhali awuketshezi aphilayo, kufanele kusetshenziswe amabhande enjoloba noma epulasitiki amelana namafutha ne-asidi ne-alikhali. Kunezinhlobo eziyisithupha zokuhambisa amabhande: 500, 650, 800, 1000, 1200 no-1400mm. Ngokuya ngobude bokudlulisa, uhlobo lwento, umthamo, amandla wokudlulisa, ukuhambisa ubude nezinye izinto zesithuthi sebhande, umsebenzisi anganquma ukwakheka kwe-conveyor nobubanzi bebhanti obukhethiwe, izingqimba zendwangu kanye nobukhulu bebhande ngokubala.
Ibhande elihambayo lisetshenziswa kakhulu ekusetshenzisweni kwensimbi, izimayini, amalahle, itheku, ezokuthutha, amanzi nogesi, imboni yamakhemikhali neminye iminyango yokulayisha, ukulayisha, ukudlulisa noma ukufaka izinto ezahlukahlukene ezikhululekile ngobuningi be-500 ~ 2500kg / m3 ekushiseni okujwayelekile. Ukuhanjiswa kwebhande kunezinzuzo zomthamo omkhulu wokudlulisa, isakhiwo esilula, ukugcinwa okulula, izindleko eziphansi nokuguquguquka okuqinile. Ukuhanjiswa kwebhande kwenziwa ngohlelo olulodwa noma oluningi lokuthuthwa kweyunithi ukuhambisa izinto. Ngokuya ngezidingo zenqubo, ingahlelwa ngendlela enezingqimba noma ethambekele. Ngaphezu kokuhlangabezana nezidingo zokudlulisa okuvundlile noma okuthambekele, ibhande elihambayo lingabuye lihlanganiswe nesigaba se-convex arc, isigaba se-concave arc kanye nesigaba esiqondile Usayizi webhlokhi wezinto ezivunyelwe ukuhanjiswa nge-conveyor yebhande ikakhulu kuncike kububanzi bebhande, ibhande isivinini, inkatho engela nokuthambekela engela, futhi kuncike nobuningi bezinto ezinkulu. Njengamanje, izinga lokushisa kwemvelo yokusebenza kwe-conveyor belt ngokuvamile - 25 ～ + 40 ℃. Ngaphezu kwalokho, inkampani yethu ikhiqiza ibhande elihambayo elikhanyayo, elihambayo eliqinile lebhande, elihambayo lamaketanga, elihambayo elihambayo kanye neminye imishini yokudlulisa inhloso ekhethekile.
Langaphambilini elihambayo ijika
Olandelayo: ukuthambekela kokuhambisa
Isikhumulo sezindiza iBelt
Ama-roller Belt Rollers
Flat Belt elihambayo
Mini ibhande elihambayo
Modular Belt elihambayo
Mesh ibhande elihambayo
O ohambisa ibhande